सिमानाकाको जनताको लागि खुशीको खबरः भारु नोटको प्रतिबन्ध हट्ने भयो
काठमाडौँ । नेपालमा भारतीय ठूला दरका नोट नचलाउने निर्णय गरेको एक महिनापछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने प्रक्रियामा नेपाल अघि बढेको छ । नेपालसँग भएका पुराना भारतीय ठूला दरका नोट चलाउन
काठमाडौँ : नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर, को–को परे कारबाहीमा ?
काठमाडौं । उपसमितिले विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न भनेको छ । विमानबारे अध्ययन गर्न कठिन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर
काठमाडौं : सरकारले भारतीय नोटमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएका छन् । मुलतः नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका बाशिन्दाहरु समान किन्न भारतीय बजारमा जान सजिलो हुने भएकाले जाने गरेपनि
वाइडबडी प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिलाई ढाँटेको खुलासा
काठमाडौँ : वाइडबडी प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदीय समितिलाई ढाँटेको खुलासा भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । मंगलबार उनले वाइडबडीका लागि भुक्तानी
काठमाडौं । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालको सीमा जोड्ने रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति र भन्सार नाकामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्न आफ्नो सरकारले काम थालेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य
काठमाडौं : नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नागरिक लगानी कोषको हिसाब किताब भद्रगोल छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नागरिक लगानी कोषका काम कारवाही प्रक्रियामा प्रश्न चिह्न उठाइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको
काठमाडौं– प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानीकर्तालाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ। बैंकको पुस ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो। अधिकांश वाणिज्य
काठमाडौं – एनएमबी बैंकले लघु तथा विपन्न वर्गका लागि तीन लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बिन धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारद्वारा जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि ब्याज
एसिया प्यासिफक समिटमा सरकारको १३ करोड खर्च
काठमाडौंः विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा करीब १३ करोड रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च भएको समाचार आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले मंसिर दोस्रो साता गरेको
सेयर लगानीकर्ताद्धारा आमरण अनसन सुरु : अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन । सेयर बजार सुधार र बिस्तारको माग गर्दै एक साता अघिदेखि रिले अनसन
नेपाल एसबिआई बैकको १५.७९ प्रतिशत लाभांस दिने
काठमाडौं : नेपाल एसबिआई बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश साधारणसभा र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि शेयरधनीले पाउने छन् । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट १५.७९